Xisbiga Folkpartiet oo siyaasad ahaan u weecday dhanka bidixda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirka: Pontus Lundahl/Fredrik Sandberg/TT
Xisbiga Folkpartiet oo siyaasad ahaan u weecday dhanka bidixda
La daabacay måndag 18 november 2013 kl 11.50
Intii uu xisbiga Folkpartiet shirweynuhu uga socdey magaalada Västerås ayuu xisbigu siyaabo badan ugu janjeertay dhinaca siyaasadda bidixda.
Tusaale ahaan waxaa shirweynaha lagu go’aamiyey in sinnaanta ragga iyo dumarka laga dhigo su’aalaha ugu muhiimsan ee uu xisbigu doorashada soo socota ku galo. Wuxuu xisbigu dadaal ugu jiraa in xeerarka qaabbilsan dembiyda galmada la xiriira lagu daro qodob loogu magacdaray raalli isaga ahaanshaha. Wuxuu kaloo shirweynuhu go’aamiyey in caymiska waalidka bil dheeraad ah loogu daro aabbaayaasha labadii bilood oo khasab ahaa oo ay horay u lahaayeen in carruurta yaryar fasax ugu qaataan. Hoggaamiyaha xisbiga Folkpartiet Jan Björklund ayaan sidaan ka yiri:
- Waxaa isweyddiin leh sababta ay dumarka da’doodu tahay 25 sano ay natiijo sarreeyaan oo uga hammi dheer yihiin nimanka facooda ah, tobankii sano oo ugu dambeysey nimanka ayaa helaayey shaqooyinka ugu wanaagsan oo ugu mushaharooyin badan. Maxay ku dhacday sidaasi? Waxaan aamminsanahay in sababta ugu weyni tahay in shaqa-bixiyayaashu ay filayaan marka ay shaqaaleynayaan qof dumar ah oo 25 sano jir ah ay shaqada ka maqnaan doonto oo aysan waqti iyo shaqo dheeraad ah qaadan doonin, sida laga fili karo qof doonaya in uu sameysto jiho xagga nolasha shaqada. Sidaas awgeed ayaana loo shaqaaleeyaa wiilasha. Habbada, haddii aan dooneynno in sinnaan ragga iyo dumarka ka abuurno shaqooyinka oo la helo mushaharo isku mid ah oo ay ragga iyo dumarku qaataan, waa in aan helnaa sinnaan ballaaran oo ka sameynno fasaxa waalidku u qaato carruurta yaryar. Kaasina wuxuu ahaa hoggaamiyaha xisbiga Folkpartiet oo ay waraysi la yeelatay Ingrid Forsberg.
Waxaa kaloo shirweynaha lagu go’aamiyey in la kordhiyo lacagta caymiska bulshada laga helo marka qofku xanuunsado ama uu shaqa-la’aan noqdo, iyo in aan laamaha adeegga bulshada sida daryaalka caafimaadka, dugsiyada iyo daryeelka bulshada laga soo dhoweyn shirkadaha ku xisaabtama faa’iida-gaarka waqtiga dhow.
Balse waxaa isla markaas shirweynaha lagu go’aamiyey in la debciyo xeerka shaqada iyo in hoos loo dhigo mushaharada ugu horreysa ee dhallinyarada. Wuxuu kaloo xisbigu doonayaa in kordhiyo waxsoosaarka tamarta nukliyeerka, in lagu biiro gaashaanbuurta Nato iyo in lacagta dalka loo beddelo lacagta Euro.
Ma la qabtaa in bil dheeraad ah lagu daro bilaha khasabka ah ee aabbaha?